Semalt Inogoverana Inobata Mazano Pamusoro Pokuti Ungadzivise Sei Rudzi Rwokurwisana
Indaneti inotora chikamu chinokosha pakunoshambadzira kwema digital, kutaurirana, nekuita basa. Mabhizimusi uye mitsuwa yekudyara vari kuendawo kudijita kuti vasvike kunze kwevatengi uye vashanyi vatsva pane imwe huru, mamiriro ezvinhu avo vanopikisa vari kushandisa iko. Kushanda webhusaiti yebhizimisi kana bhizinesi reB2B kunze kwehuwandu hwehutano hwehutano hunoita kuti bhizinesi rive nengozi huru uye ngozi - workforce management software jobs.
Mazuva ano, vatengesi vari kuunza zvigiso zveTrojan uye malware izvo zvinoda mari kubva kuvhudzi vebhishopu mushure mekutora zvizere zvemasayiti avo. Zuva rimwe nerimwe, vanopfuura mabhiriyoni 1 vatengi vanoshanyira mitsva yekutsvaga maitiro ekutsvaga kutsvaga zvitsva uye zvepakutanga zvakagadzirwa. Kuenda digital kunotsigira mabhizimisi ekudzoka kwakakura mushure mekushandiswa kwesarudzo yakareba kwenguva refu yekuchengetedza vashanyi vakawanda uye kugadzira motokari.
Vaiti vezvakaipa vanove vachigadzira nzira itsva uye zvigadzirwa zvekuparadzira mumakombiyuta uye mawebsite pasina vvumo vanobvuma. Kune rumwe rutivi, SEO vadzidzisi vave vachiita rusununguko rwekuti vangadzivisa sei kutyisidzirwa nekutyisidzira kwakaipa. Kuve wakangwarira pakushambira kunobatsira kudzivirira utachiona hutachiona.
Mazano anotevera akataurwa naRyan Johnson, nyanzvi inotungamira kubva ku Semalt , ichakubatsira iwe kushanda webhusaiti yako nekuchengeteka usingatongogumburwi nevanokuvadza.
Kuchengeta yako system software kusvika pane
Kubva purogiramu dzemazuva uye mapurogiramu inoisa vashandisi vebasa rekuchengetedza vhudzi muhutano hukuru hwekunyengedzwa nyore.Haizvo munhu anoda kubuda kunze kwebhizimisi nekuda kwekutengedzwa nevashambadzi. Funga kuvandudza software yako uye -zvichengetedza zvishanduro zvekupedzisira zviripo paIndaneti kudzivisa Ransomare neTirm virus kuti irege kuvhara kombiyuta yako.Kugadzira anti-malware kunewo basa rinokosha pakuvhara kurwisa nekutyisidzira.Iva danho rimwe mberi kwevanokuvadza nekuisa uye kuronga zvizere zvizere kuti uone uye kubvisa zvose zvinotyisa zveTrojan zvingave zvakaiswa pa PC yako pasina ruzivo rwako.
Zvaunotora pa spam emails nezvimwe zvibatanidzwa
Mazuva ano, spammers vari kutora mukana wevashandi vekushandisa kombiyuta nekuvatumira mazwi asinganyengeri uye mharidzo kumakero avo e-mail. Mushure mokuzarura email, muteresi anotorazve kunzvimbo yakaipa yehusaiti iyo vanotengesa vanoshandisa kuwana mamwe mashoko pamusoro pomupombiyuta. Mune dzimwe nguva, spam emails inosanganisira yakagadziriswa nehutano hunoita kuti vashandisi vekombiyuta vagadzirise ruzivo rwavo uye vagamuchire zvikwereti.
Zvaunotora panzvimbo yekutakura desktop
Remote desktop connections inoshandisa vaiti vepanhau vari pangozi sezvo vakaiswa malicious malware sezvinonzi ransomware runs kure kunze kwemvumo yevadzidzisi vePC. Kuti urege kudzivirirwa nevatambudzi, bvisa nzvimbo yako iri kure yakadzika kuti uvhare kuparadzirwa kwekutyisidzira paPC yako.
Kuita zvipembenene nguva dzose
Kuita zvipembenene nguva dzose pa PC yako inoita senzira imwe yekudzivirira ransomware kutyisidzira kubva kuparadzira paPC yako. Kushanda nevatengesi vekuchengetedza kunokuisa munzvimbo yakanaka yekudzivirira utachiona hweTrojan uye ransomware.
Pamunosvika pakukurukurirana uye kutengeserana kwepaIndaneti, nzvimbo yako yekuchengetedza webhusaiti inouya kutanga. Dzivisa kubhadhara mari yakawanda kune vanonyengedza nekubhadhara nyanzvi dze IT kuti uone pahutano hwako hwewebsite uye chengetera yekubasa kwako kweInternet. Vatengi vanosarudza sangano rinonyanya kukoshesa kuchengeteka kwavo. Bata vatorwa vako nekucherechedza nekuisa mberi kwekuchengeteka kwewebhu.